Dib-u-habeynta Socdaalka ee Federaalka - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > Dib u habeynta Socdaalka Federaalka
La daabacay: March 20, 2022
CIRC waxay leedahay manhaj is dhexgal ah si ay bulshada u barato xuquuqdooda marka ay la kulmaan ICE ama booliiska gobolka Colorado.
Soogalootiga ku sugan Colorado iyo guud ahaan dalka waxay la kulmeen sanado cabsi, hubanti la'aan, iyo xanuun taasoo ka dhalatay nidaamka socdaalka ee jabay. Hadda waa waqtigii isbeddel geesinimo leh -- Koongaraskuna wuu og yahay. CIRC waa xubin ka tirsan Dhaqdhaqaaqa Dib-u-habaynta Socdaalka ee Waddaniga ah (FIRM) kaas oo ka shaqeeya in lagu riixo siyaasadda iyo sharciga socdaalka caddaaladda iyo bini'aadantinimada ee heer qaran. Xubinta CIRC ee ay hogaamiso guddiga hagidda federaalka ayaa sidoo kale shirar joogta ah u yeesha si ay u abaabulaan oo ay u qaadaan tallaabo ay ugu riixayaan dib-u-habaynta socdaalka qaranka ee Colorado.
Waa kuwan qaar ka mid ah biilasha dib u habaynta socdaalka qaranka ee la soo bandhigay ilaa 2021:
Dib U Dhis Si Ka Fiican
Sharciga Jinsiyadaha Mareykanka
Sharciga Riyada iyo Ballanqaadka
Sharciga Jinsiyadda ee Shaqaalaha Muhiimka ah
Xeerka Casriyaynta Beeraha
Hindise-sharciyeedka Dib-u-soo-celinta Wanaagsanaanta ee hadda ku jira golaha guurtida waxa uu ka kooban yahay qodobbo socdaalka oo abuuri doona nidaam la yiraahdo " sii-daynta sharafeed meel ku yaal". Tani waxay siinaysaa maqaam ku meel gaar ah malaayiin dad ah laakiin ma abuuri doonto waddo loo maro jinsiyadda.
Qof kasta oo ku sugan Mareykanka ilaa Janaayo 1, 2011, biilku wuxuu bixin doonaa:
Xaaladda ku meel gaadhka ah iyo ogolaanshaha shaqada ee 5 sano, dib loo cusboonaysiin karo hal mar 5 sano oo kale - 10 sano
Ka ilaalinta masaafurinta muddadaas
Awoodda lagu codsan karo sii-daynta sharafeed horudhac ah si aad ugu safarto dibadda; iyo
U-qalmitaanka qaar ka mid ah faa'iidooyinka dawladda dhexe iyo gobolka, oo ay ku jirto ACA (Obamacare).
Soo jeedintu sidoo kale:
Waxay ka mamnuucday maamul mustaqbalka inuu ka noqdo heerkan
Waxay ka mamnuucday DHS inay u gudbiso codsadesta heerkan ICE ama CBP iyadoo lagu salaynayo macluumaadka ku jira codsigooda.
Soo jeedintu ma abuuri doonto waddooyin cusub oo loo maro jinsiyadda, laakiin dadka qaarkiis, heerkani wuxuu ka dhigayaa inay u qalmaan kaararka cagaaran iyadoo lagu saleynayo xiriirka qoyska ee jira.
CIRC waxay ugu baaqaysaa sharci-dajiyayaasheenna inay maraan dariiq dhammaystiran oo dhammaystiran oo loo maro jinsiyadda, ma aha qiyaas nus ah oo ku meel gaar ah.
Sharciga Jinsiyadaha Mareykanka wuxuu ku saleysan yahay qorshaha dib u habeynta socdaalka ee Madaxweyne Biden. Waxay bixisaa dariiqa sideed sano ee muwaadinimada inta badan muhaajiriinta aan sharciyeysnayn, iyo dariiqa la dedejiyay ee loogu talagalay shaqaalaha muhiimka ah iyo kuwa qaata DACA iyo TPS. Waxay leedahay dhowr tallaabo oo waxyeello leh, sida soo-saarista dambiilayaasha ee muhiimka ah iyo kordhinta maalgelinta ilaalinta xuduudaha. Si kastaba ha noqotee, dhammaan biilasha socdaalka qaran ee hadda jira, sharcigan wuxuu bixin doonaa dariiqa loo wada dhan yahay ee muwaadinnimada.
Biilkan ayaa would
U abuur waddo loo maro muwaadinimada malaayiin muhaajiriin ah oo aan sharciyeysnayn
Haddii biilku dhaafo, soogalooti aan sharciyeysnayn oo hadda ku sugan Mareykanka oo yimid kahor 1/1/21 wuxuu xaq u yeelan karaa waddadan dhalashada. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka soo galootiga ah inay codsadaan sharci ku meel gaar ah, ka dibna ay codsadaan kaarka cagaaran shan sano kadib. Shaqaalaha beeraha ee soo galootiga ah, iyo sidoo kale kuwa haysta DACA iyo TPS, waxay codsan karaan kaarka cagaaran isla markiiba.
In la adkeeyo ilaalinta shaqada ee soo galootiga
Sharciga ayaa ka ilaalin doona shaqaalaha dhibbanayaasha aargoosiga goobta shaqada in laga masaafuriyo. Waxay siin doontaa shaqaalaha dhibku ka soo gaadhay xadgudubyada foosha xun iyo la shaqaynta hay'adaha ilaalinta shaqaalaha fursad weyn oo ay ku helaan fiisooyinka U. Waxa kale oo ku jira ganaaxyada loo-shaqeeyaha ku xadgudba sharciyada shaqada.
Qaybo ka mid ah nidaamkayaga socdaalka ka dhig kuwo waxtar badan oo caddaalad ah
Sharciga ayaa ka takhalusi doona waqtiga kama dambaysta ah ee sheegashada magangalyo-doonka, kordhinta maalgelinta howlaha magangelyo-doonka, dib-u-dhigista dib-u-dhaca iyo yareynta waqtiyada sugitaanka. Daboolka fiisooyinka U ayaa sidoo kale loo kicin doonaa fiisooyinka 30,000. Hindise sharciyeedka ayaa ballaarin doona tababarka garsoorayaasha socdaalka, wuxuu horumarin doonaa tikniyoolajiyadda maxkamadaha socdaalka, wuxuu ka saari doonaa sharciga aan caddaaladda ahayn ee "3 iyo 10 sano oo xarig ah", wuxuuna garsoorayaasha siin doonaa xorriyad dheeraad ah oo ay ku eegaan dacwadaha isla markaana ay u fidiyaan gargaarka.
Ka ilaali cadaalad darada nidaamka socdaalka
Sharciga ayaa mamnuucaya takoorka ku saleysan diinta ama galmada. Waxay sidoo kale xaddidi lahayd awoodda ay leeyihiin madaxweynayaasha inay soo saaraan ganaaxyo. Intaas waxaa sii dheer, waxay soo bandhigi doontaa dib-u-habeyn si wax looga qabto dhaqan-xumada Waaxda Amniga Gudaha (DHS).
Sii taageero muhaajiriinta hadda ku sugan Mareykanka
Sharcigu wuxuu ballaarin doonaa barnaamijyada maaraynta kiisaska qoyska, wuxuu maalgelin doonaa degmo dugsiyeedyada waxbarista carruurta aan lala socon, wuxuuna dib u bilaabi doonaa Barnaamijka Bartamaha Ameerika ee Yaryar si uu ula midoobo carruurta ehelka Mareykanka. Waxay sidoo kale abuureysaa barnaamijka sii-daynta sharafeed ee midaynta qoysaska Bartamaha Ameerika si loogu mideeyo qoysaska codsiyada kafaala qaadka qoysaska la oggolaaday.
Hoos u dhig baahida loo qabo in dadku galaan safar qatar ah si ay ugu haajiraan Mareykanka
Sharciga ayaa looga golleeyahay in lagu maalgeliyo $ 4 bilyan oo doolar qorshe afar sano ah oo lagu yareynayo tahriibka iyadoo la kordhinayo kaalmada la siinayo dalalka Bartamaha Ameerika. Waxay sidoo kale xarumo ka sameyn doontaa Bartamaha Ameerika oo dhan si ay uga baaraandegaan dadka soo baro kacay si dib loogu dejiyo Mareykanka ama meel kale.
Kordhi ilaalada waxyeelada leh ee xadka iyo goobta shaqada
Sharciga ayaa kordhin doona maalgalinta DHS wuxuuna siin doonaa maalgalinta “darbi caqli badan” xadka, taas oo macnaheedu noqon doono ilaalin dheeri ah oo ku saabsan gudaha iyo hareeraha bulshada xuduudaha. Sababtoo ah eexasho nidaamsan oo ku saabsan sharci fulintayada, hirgelinta socdaalka, iyo nidaamyada cadaaladda dembiyada, kormeerka xad-dhaafka ah wuxuu keenaa in dadka midabkoodu si aan sax ahayn loo bartilmaameedsado loona xiro. Sharciga ayaa sidoo kale kordhin doona "xaqiijinta shaqada," taas oo dhaawacaysa shaqaalaha iyo qoysaskooda halkii loo shaqeeyeyaasha anshax darrada ah ee iyaga shaqaalaysiiya ee ka faa'iideysta. Dabagalka iyo xaqiijinta shaqaalaynta ee badatay nagama dhigayaan amaan, kaliya waxay waxyeelleeyaan bulshadeena waxayna dadka si xad dhaaf ah ugu ciqaabaan khaladaadka yar yar ama sameynta xulashooyinka kaliya ee ay heli karaan.
In la sii wado oo la ballaariyo ka-reebitaan badan oo dambiyeed si loogu noolaado sharci ahaan degenaansho
In kasta oo biilku ka tagayo suurtagalnimada sharciyada ka saarida dambiyada qaarkood ee hore in laga qaado, wuxuu ilaalin doonaa qawaaniin badan oo ka hor istaagaya dadka dembiyada qaarkood lagu xukumo inay helaan sharci. Waxay sidoo kale soo saari doontaa xeerar cusub oo xiraya xitaa dad badan. Baararka dambiyada ee kuwan oo kale ah waa kuwo aan micno lahayn oo aan caddaalad ahayn. Haddii muwaadin Mareykan ah lagu helo dambi, waxay fulinayaan ciqaabtiisa ama waxay bixinayaan ganaaxa, ka dibna waa la sameeyaa. Laakiin dad badan oo aan heysan dhalashada ayaa laba jeer la ciqaaba: mar nidaamka cadaalada dembiyada, ka dibna mar labaad nidaamka socdaalka oo ka horjoogsanaya sharci ahaan ama dhalasho ahaan.
Sharciga Riyada iyo Ballanqaadku waa biil u abuuri kara dariiqa loo maro muwaadinimada dadka qaata DACA iyo TPS (Ku Meel Gaarka ah Xaaladda La ilaaliyay). Horay baa looga gudbay Aqalkii! Nasiib darrose, gurigu wuxuu ku daray dhowr qallafsan "carve-outs" taas oo ka reebaysa kumanaan dad ah waddada dhalashada. Hadda, waxaan ugu yeereynaa golaha guurtida inay meel mariyaan nuqul nadiif ah oo ka mid ah Sharciga RIYADA - oo ah nooc aan ku jirin xumaan-soo-saarka dambiilayaasha ee nooca Gurigu leeyahay.
XAQIIQOOYIN DEG DEG AH: Sharciga Riyada iyo Ballanqaadka ayaa would
Sii sharci deganaansho shuruud leh qaar ka mid ah soo galootiga
Haddii aad tahay qof qaata DACA, si aad ugu qalanto, waa inaad leedahay:
Kaalay Mareykanka kahor intaadan 18 jir gaarin
Waqti buuxa ayuu ku noolaa Mareykanka tan iyo markaas
Kasbaday ama kujira howsha kasbashada dibloomada dugsiga sare ama wax u dhigma Mareykanka
Haddii aad tahay haystaha TPS, waa inaad leedahay:
Wuxuu ku noolaa wadanka Mareykanka ugu yaraan seddex sano kahor taariikhda biilka loo saxiixay sharci.
Muujiyay u-qalmitaankaaga TPS bisha Sebtember 17, 2017 ama kahor
Haddii aad tahay qaate DED, waa inaad haysatay DED laga bilaabo Janaayo 20, 2021.
Sharcigu wuxuu u oggolaanayaa dadka buuxiya shuruudahaan inay codsadaan deganaansho rasmi ah - if waxay ka gudbi karaan baaritaanka hore waxayna bixin karaan khidmadda dalabka.
Jooji qaatayaasha DACA qaarkooda inay marin u helaan dariiqa loo maro muwaadinimada
In kasta oo sharcigan uu siin doono sharci deganaansho rasmi ah oo shuruud ku xiran qaar ka mid ah muhaajiriinta, shakhsiyaadka diiwaannada dambiyadii hore ka galay ayaa laga hor istaagi karaa waddada dhalashada. Tusaale ahaan, soogalootiga ku hawlan shaqo galmo ahaan xaq uma laha. Muhaajiriinta galay dambiyo fudud ama dambiyo kale oo yar yar ayaa sidoo kale xaq u yeelan doonin.
Sharciga ayaa dhigaya in Wasaaradda Amniga Gudaha ay “si ku-meelgaar ah u diidi karto codsi haddii shisheeyaha uu khatar ku yahay nabadgelyada bulshada.” Weedhani waxay DHS siineysaa awood ay ku diiddo dalabyada iyadoo lagu saleynayo heerka aan caddayn ee “khatarta keenaya.” Sidaas darteed, waxay ka horjoogsan doontaa soogalooti badan fursad cadaalad ah oo ay ku heli karaan dhalashada.
Ugu dambeyntiina, dadka qaata sharciga degenaanshaha shuruudaysan ayaa waayi kara deggenaanshahooda haddii ay galaan dambi culus. Tani waa cadaalad daro qoto dheer. Qof kasta oo dambi lagu helo waxaa horey u ciqaabi doona nidaamka cadaaladda dembiyada. Ma jirto sabab ay tahay in soogalootiga aan sharciga lahayn lagu ciqaabo labalaab iyadoo waliba luminaysa sharciyadooda.
In lataliye sharciyeed lasiiyo lataliyeyaasha doonaya dib u eegista garsoorka
Sharciga Riyada iyo Ballanqaadka wuxuu hubin doonaa in codsadayaasha kiisaskooda loo diiday ay raadsan karaan dib u eegis xagga garsoorka ah isla markaana ay u doodaan garyaqaan. Si loo maalgeliyo la-taliye maxkamaddu u magacowday codsadayaasha, Khasnadda ayaa sameyn doonta "Xisaab La-Taliyaha Socdaalka," oo lagu maalgeliyo khidmadaha dalabka iyo $ 25 dheeraad ah oo dheeraad ah. Codsadeyaasha caddeeyay in laga dhaafi doono bixinta khidmadaha dalabka ma aha inay bixiyaan dheeri dheeri ah.
Tirtir ama jooji dacwadaha masaafurinta ee loogu talagalay dadka haysta DACA iyo TPS ee u qalma
Sharcigan ayaa hakad galin doona dacwadaha masaafurinta ee loogu talagalay dadka qaata DACA ee buuxiya shuruudaha looga baahan yahay xaalada deganaanshaha rasmiga ah ee shuruudaysan waxayna ka hortageysaa masaafurinta dadka qaata DACA ee kayar 18 sano hadii ay buuxiyaan dhamaan shuruudaha marka laga reebo inay kujiraan dugsi sare ama wax u dhigma. Dacwadaha masaafurinta ee loogu talagalay dadka haysta TPS ee leh DED ee u qalma deganaanshaha rasmiga ah ee sharciga ah sidoo kale waa la kansali doonaa sida ku xusan biilkan.
U ogolow dadka qaata TPS ama DACA ee la tarxiilay ama ka tagay Mareykanka inay ka codsadaan dibadda
Sharciga Riyada iyo Ballanqaadka ayaa u oggolaan doona Riyoodayaasha xaqa u leh ee laga masaafuriyey maamulka Trump in ay dalbadaan gargaar dibedda ah. Biilka ayaa sidoo kale u oggolaanaya dadka qaata TPS ee la soo tarxiilay ama si iskood ah uga tagay Mareykanka markay ahayd ama wixii ka dambeeyay Sebtember 17, 2017 si ay u codsadaan deganaansho rasmi ah oo sharci ah haddii ay la kulmaan shuruudo gaar ah, oo ay ka mid yihiin iyagoo si joogto ah ugu noolaa Mareykanka ugu yaraan saddex sano ka hor bixitaankooda.
Sharcigan ayaa shaqaalaha aasaasiga ah ee aan sharciga lahayn siinaya fursad ay ku noqdaan muwaadiniin Mareykan ah. Markay sii dhex marayso Koongaraska, waa inaan hubinno inaysan ku jirin caqabado aan caddaalad ahayn oo ka hor istaagaya shaqaalaha muhiimka ah inay u qalmaan.
XAQIIQOOYIN DEG DEG ah: Jinsiyadaha ee Shaqaalaha Muhiimka ah ee Sharciga ah would
Sii shaqaalaha aan muwaadinimada ahayn ee muhiimka ah Sharciga Degenaanshaha Joogtada ah
Marka loo eego Sharciga Jinsiyadda ee Shaqaalaha Muhiimka ah, shaqaale kasta oo aan muwaadin ahayn oo ka shaqeeya mid ka mid ah noocyada adeegga, daryeelka guriga, caafimaadka, iyo beeraha, iyo warshadaha adeegga dhismaha ayaa codsan kara inuu isla markiiba helo deganaansho rasmi ah. Dadka aan sharciyeysnayn ee ka shaqeynayay warshadahaan laakiin shaqooyinkoodii ku waayey ama uga tegey COVID-19 dartii ayaa iyaguna u qalmi doona barnaamijkan. Ugu dambeyntiina, xubnaha qoyska ee shaqaale muhiim ah oo dukumenti ah oo ka dhintey COVID-19 sidoo kale waxay awoodi doonaan inay codsadaan deganaansho rasmi ah.
Ka takhalus baararka saddexda iyo tobanka sano ah si aad dib ugu soo gasho
Baararka seddex-iyo-tobanka sano ah wuxuu ka yimid Sharciga Dib-u-habeynta Socdaalka Sharci-darrada ah iyo Mas'uuliyadda Muhaajiriinta. Waxay ka mamnuucaan shaqsiyaadka aan sharciyeysnayn inay ku soo laabtaan Mareykanka seddex ama toban sano midkood haddii ay si iskood ah u baxaan ka dib markay joogaan Mareykanka muddo dheer. Sharciga Jinsiyadda ee Shaqaalaha Muhiimka ah ayaa ka takhalusi lahaa baararkaas, kaas oo gacan ka geysan lahaa in qoysaska la wada ilaaliyo lana ixtiraamo xuquuqda shaqsiyeed ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Sharciga Casriyeynta Beeraha (FMA) wuxuu siiyaa dariiq adag, xaddidan muwaadinimada shaqaalaha beeraleyda. Biilasha kale, sida Sharciga Dhalashada Mareykanka, waxay shaqaalaha beeraleyda siiyaan waddo wanaagsan oo loo maro jinsiyadda iyadoon lagu xadgudbin xuquuqdooda aadanaha iyo kan shaqaalaha. Sidaa darteed, CIRC ma taageerto foomka hadda jira ee FMA. Waxaan la shaqeyn doonnaa wakiiladeena si aan isugu dayno inaan wax uga bedelno qeybaha waxyeelada leh ee sharcigan.
Xeerka Casriyaynta Beeraha ayaa would
Ballaari barnaamijyada shaqaalaha ku meel gaarka ah, kuwaas oo dhaawacay beesheena
Ficilkani wuxuu kobciyaa barnaamijka H-2A ee martida wuxuuna abuuraa barnaamij kale oo lamid ah. Barnaamijyada shaqaalaha kumeelgaarka ah waxay leeyihiin taariikh xadgudub ah kaqeybgalayaasha iyo ka faa'iideysiga shaqadooda, sidaa darteed Guddiga Adeegga Saaxiibada Mareykanka wuxuu ugu yeeraa "kuwo la mid ah ka ganacsiga dadka." In kasta oo ay ku jiraan ilaalinta shaqada, kormeeristu waa dhif iyo waxtar la'aan. Tani wax la yaab leh ma ahan marka loo eego barnaamijyada loo dhisay inay siiyaan shirkadaha shaqo jaban sida ugu macquulsan.
Weydiiso E-xaqiijin, oo ciqaabta shaqaalaha iyo qoysaskooda halkii loo-shaqeeye aan anshax lahayn
FMA waxay ubaahantahay dhamaan ganacsiyada beeraha inay adeegsadaan nidaamka E-verification si loo hubiyo xaalada socdaal ee shaqaalaha hada iyo mustaqbalka. Ganacsiyada looma oggolaan doono inay shaqaaleeyaan qofkii lagu arko inuu yahay mid aan sharci ahayn. Khubarada ayaa qiyaasaya inay taasi ku qasbi karto boqolaal kun oo shaqaale ah inay waayaan shaqooyinkooda, iyaga oo ciqaaba iyaga iyo qoysaskooda halkii ay ka ahaan lahaayeen loo shaqeeyayaasha ka faa’iideysta shaqadooda.
Ka reeb shaqaalihii hore ama qofkasta oo aan awoodin inuu 8+ sano ka shaqeeyo beeraha
Jidka loo maro ficilka ee muwaadinimada ayaa u baahan muhaajiriinta inay ka shaqeeyaan ugu yaraan sideed sano beeraha. (Dadka hore uga soo shaqeeyay beeraha 10 + sano waa inay shaqeeyaan afar sano oo dheeri ah, qof kasta oo kalena waa inuu shaqeeyaa siddeed sano oo dheeri ah si uu ugu qalmo kaarka cagaaran.) Tan macnaheedu waa in qof kasta oo jiran ama dhaawacma dartiis shaqada xoog u baahan waxaa si xaqdaro ah looga saari karaa dariiqa loo maro muwaadinimada.
Baaskiilayaasha Colorado ee Jinsiyadda ayaa yimid Chicago ka dib markii ay ku lugeeyeen in ka badan 1,000 mayl Denver iyaga oo u socda DC! Halkan ka akhri wax badan
Dimuqraadiyiinta Qunyar socodka ah waxay ku biiraan Senatarrada GOP si ay u taageeraan sharciga dib u dhigista Ciwaanka 42 ka cayrinta xudduudaha
Koox senatarrada dimuqraadiga ah ayaa Khamiista ku biiray sharci-dajiyayaasha Jamhuuriga soo saarista tallaabo si ku meel gaar ah u xannibaysa qorshaha maamulka Biden ee lagu joojinayo xannibaadaha la xiriira masiibada ee u oggolaanaysa mas'uuliyiinta xuduudaha inay si dhakhso leh u eryaan muhaajiriinta. Akhriska sii wad
Sagaal Dalbasho ee CIRC ee Dibuhabaynta Socdaalka